Ungayisetha kanjani kabusha noma uyiqale kabusha i-iPhone X / Xr / Xs entsha ngezinyathelo ezi-3 ezilula | Izindaba ze-IPhone
Ukufika kwe-iPhone X entsha yi- ushintsho olusha lwendlela yokwenza ukusetha kabusha kanzima noma ukuqala kabusha idivayisi uma kwenzeka "ibanjwa" nganoma yisiphi isizathu. Futhi ukuthi kumamodeli we-iPhone ngaphambi kwe-iPhone 7 ne-7 Plus, indlela yokuqalisa kabusha imishini ngokucindezela inkinobho yasekhaya nenkinobho yamandla ngasikhathi sinye. Ngokufika kwe-iPhone 7 entsha nokunyamalala kwenkinobho ebonakalayo, i-Apple iguqule indlela yokusetha kabusha noma ukuqala kabusha i-iPhone, kulokhu bese kuyisikhathi sokucindezela inkinobho yamandla nenkinobho yevolumu phansi ngasikhathi sinye.
Ngokuba imodeli entsha evula ezitolo zayo namuhla i-Apple, sishintsha inqubo futhi futhi kulokhu ngaphandle kwezinkinobho ku-iPhone X entsha okufanele sikwenze izinyathelo ezintathu ezilula esizozichaza ngemuva kokugxuma.
1 Ungayiqala kanjani kabusha noma usethe kabusha i-iPhone X / Xr / Xs
2 Ungayicisha kanjani i-iPhone X, i-iPhone Xs, i-iPhone Xr, noma i-iPhone Xs Max
3 Ungayiqala kanjani kabusha i-iPad Pro nge-Face ID
4 Ungayicisha kanjani i-iPad Pro nge-Face ID
5 Ngivale noma ngiqale kabusha idivayisi
6 Kungani i-iPhone yami ilenga
Ungayiqala kanjani kabusha noma usethe kabusha i-iPhone X / Xr / Xs
Lapho isikrini se-iPhone, i-iPad noma i-iPod touch iba mnyama noma idivayisi ayiphenduli Kunoma yiziphi izinkinobho noma ukuxhumana esikwenza esikrinini, kufanele siphoqe ukuqala kabusha kwedivayisi yethu.
Ungayiqala kanjani kabusha noma usethe kabusha i-iPhone X uma kungenzeka ungaphenduli nganoma iyiphi indlela:
Sicindezela i- inkinobho yevolumu futhi siyadedela
Sicindezela i- inkinobho yevolumu phansi bese siyadedela
Sigcina sicindezele inkinobho eseceleni «Vuliwe / Valiwe» kuze kuvele ilogo ye-apula
Uma kwenzeka ukuthi ukuqala kabusha okuphelele kwedivayisi kungayixazululi inkinga, okumele sikwenze ukufinyelela noma ukuzama ukufinyelela kuzilungiselelo ze-iPhone. Senza isipele ku-iTunes, iCloud noma lapho sifuna khona bese siya kuzilungiselelo -> Izilungiselelo -> Okuvamile -> Qala kabusha. Lokhu kufanele iqale kabusha i-iPhone X futhi ixazulule inkinga, noma kunjalo kufanele ngaso sonke isikhathi senze amakhophi wesipele uma kuvela inkinga yalolu hlobo yokuthi kufanele sibuyise i-iPhone.
Ungayicisha kanjani i-iPhone X, i-iPhone Xs, i-iPhone Xr, noma i-iPhone Xs Max
Kuze kwethulwe i-iPhone X, inkinobho yasekhaya / yokulala ye-iPhone nayo isivumele ukuthi sicishe idivayisi uma siyibamba phansi imizuzwana embalwa. Kodwa-ke, ngokwethulwa kwe-iPhone X konke kushintshile. Uma sifuna ukucisha i-iPhone X yethu, namamodeli wakamuva kufanele ngokuhlanganyela cindezela inkinobho esekhaya / yokulala kanye nezinye izinkinobho zevolumu.
Ngaleso sikhathi, isikrini se-iPhone yethu sizobonisa isilayida esisimema ukuthi sitshele umunwe silandela indlela yaso eya cisha idivayisi.
Le akuyona ukuphela kwendlela okufanele sicime ngayo i-iPhone X yethu, ngoba ngamamenyu wezilungiselelo, sinenketho yokuvala i-iPhone yethu, kungakhathalekile imodeli. Ngalokhu kumele siye ku Amasethingi> Okujwayelekile> Cisha ugesi. Lolu khetho luyatholakala naku-iPad, kungakhathalekile imodeli.
Ungayiqala kanjani kabusha i-iPad Pro nge-Face ID
Uhla lwe-iPad Pro 2018 lube ngolokuqala ukungena emakethe ngaphandle kwenkinobho yasekhaya ebihambisana nale divayisi kusukela kwimodeli yayo yokuqala. Ukuze unikeze usayizi omkhulu wesikrini ngosayizi ofanayo, i-Apple inqume ukungeza ubuchwepheshe be-Face ID ku-iPad Pro range ngo-2018, ngakho-ke inkinobho yokuqala iyanyamalala futhi asikwazi ukuqala kabusha idivayisi njengoba senza kuze kube yileso sikhathi.
Inqubo yokuqalisa kabusha i-iPad Pro nge-Face ID nakumamodeli wakamuva ilula kakhulu futhi ngeke isithathe isikhathi eside, kufanele landela izinyathelo ezingezansi:
Cindezela bese ukhipha ngokushesha inkinobho yevolumu phezulu.
Cindezela bese ukhipha ngokushesha inkinobho yevolumu phansi.
Cindezela bese ubamba inkinobho yasekhaya / yokulala kuze kube yilapho idivayisi iqala kabusha.
Ungayicisha kanjani i-iPad Pro nge-Face ID
Inqubo yokuvala i-iPad Pro nge-Face ID Kuyafana nalokhu esikwenzayo ukucisha i-iPhone X namamodeli akamuva. Kumele sicindezele inkinobho yokuqala / yokulala futhi ngaphandle kokukhipha cindezela noma iyiphi yezinkinobho ezimbili zevolumu kuze kuvele isilayidi esikrinini esisimema ukuba sicishe idivayisi.
Ngivale noma ngiqale kabusha idivayisi
Njengekhompyutha, ukuqala kabusha akufani nokuvala. Uma siqhubeka nokucisha i-iPhone yethu, isistimu yokusebenza izoba nesibopho sokuvala zonke izinqubo ezivulekile ukuze siqhubekele ekucimeni okuphephile kohlelo lokusebenza nokuthi alulethi izinkinga zokusebenza uma siluqala futhi. Le mbono efanayo isebenza kumakhompyutha.
Ngakolunye uhlangothi, uma siqala kabusha idivayisi, ukusebenza kohlelo lokusebenza kunqanyuliwe ngokuphelele, ngaphandle kokunikeza isikhathi sokuthi izinhlelo zokusebenza nezinsizakalo zivalwe kahle kudivayisi yethu. Njengasesimweni esidlule, le mbono iyasebenza nakumakhompyutha. Inkinga ngokuqalisa kabusha ikhompyutha yethu yilokho hhayi nje kuphela ukuthi singalahlekelwa idatha kunqubo, ngoba ingxenye yohlelo olusebenzayo ingonakaliswa, kodwa futhi le nqubo ithatha isikhathi eside ukuthi idivayisi isebenze futhi.
Nini siphoqelekile ukuqala kabusha i-iPhone yethu, ngoba ayiphenduli kunoma yimuphi umsebenzi, noma kulowo osivumela ukucisha uhlelo, ngeke sibhekane nobungozi bokulahleka kwedatha noma ukuthi laba banethuba lokonakaliswa, ngoba uhlelo lumiswe ngokuphelele futhi engenzi senzo.
Kungani i-iPhone yami ilenga
Isizathu esiyinhloko esenza ukuthi i-iPhone yethu ibonise izinkinga zokusebenza, sikuthola kokubili ohlelweni lokusebenza nasezinsizeni ezithile. I-Apple yakhela inguqulo entsha ngayinye ye-iOS ngenombolo ethile yamadivayisi, ngakho-ke ivumelana nenye ngayinye, ukuze ukusebenza kwe-iPhone yethu kufanele kube okungcono kakhulu.
Ngenguqulo ngayinye entsha ye-iOS, onjiniyela kufanele benze buyekeza izinhlelo zakho zokusebenza ukuzenza zisebenzisane ngokuphelele nohlobo olusha lwe-iOS. Ngenhlanhla kubasebenzisi, onjiniyela abaningi babuyekeza ngokushesha izinhlelo zabo zokusebenza ukuze zihambisane futhi bangabi nezinkinga zokusebenza. Uma bethatha isikhathi eside kunokudingekile, i-Apple iyaxhumana nabo ukusheshisa inqubo yokuvuselela uma bengafuni ukubonana ngaphandle kwe-App Store.
Kusukela ngo-2017, i-Apple yenze ukuthi itholakale kubo bonke abasebenzisi a Uhlelo lwe-beta lomphakathi lwe-iOS, ngakho-ke noma imuphi umsebenzisi ofuna ukuhlola izindaba zenguqulo elandelayo ye-iOS angenza kanjalo ngaphandle kokuba ngunjiniyela. Njengomthetho ojwayelekile, i-Apple ivame ukukhipha ama-betas ambalwa wenguqulo elandelayo ye-iOS yonjiniyela kuqala kuphela, ngaphambi kokukhipha i-beta yomphakathi.
Isizathu asikho okunye ngaphandle ukuzinza kwesistimu. Ukuzinza kohlelo kungokwesibili konjiniyela, ngoba inhloso yabo ukuthi baqale ukuvuselela izinhlelo zabo zokusebenza kunguqulo entsha ye-iOS futhi ngengeze ukuthi bahambisane nemisebenzi emisha eyenziwe yi-Apple.
Ukuzinza kwedivayisi yethu ephethwe i-beta ye-iOS akuyona eyanele kakhulu uma sisebenzisa i-iPhone yethu nsuku zonke njengedivayisi enkulu, ngoba ingaqalwa kabusha ngezikhathi ezithile futhi ngaphandle kwesizathu, izinhlelo zokusebenza zingavalwa noma zingavulwa ngokuqondile nganoma yisiphi isikhathi ngaphezu kokuthatha isikhathi eside ukuvula ... I-beta futhi njenganoma iyiphi i-beta yohlelo lokusebenza, Ingaphansi kokuthuthukiswa kuze kukhishwe inguqulo yokugcina.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba ze-IPhone » iPhone » Okokufundisa namanyuwali » Ungayisetha kanjani kabusha noma uyiqale kabusha i-iPhone X entsha ngezinyathelo ezintathu ezilula
Umngani omuhle wokunikela ungisindise ku
UDavid Leonardo Gómez Pulido kusho
Ngalesi simo se-COVID19, ngokugeza okufanelekile ngamanzi (ungacwilisi noma ubeke ngaphansi kompompi), vele ufake intende yesandla ngesandla sesandla. Umakhalekhukhwini uvuleka (bhanqa ichibi lama-apula, kuthi ngemuva kwemizuzwana eyi-10-15, isibuko sikhanye bese sicisha, ichibi lama-apula livela futhi bese umjikelezo uqhubeka.beka phambi kwehitha elincane, ulinde amanzi okungenzeka ngiyifakile ukuze ihwamuke, futhi ngiyethemba ukuthi ngingayibuyisa i-iPhone yami.
Isiphetho, i-iPhone X iyisetshenziswa esibucayi kakhulu samanzi, akulona iqiniso ukuthi i-iPhone X ayinamanzi.
Phendula uDavid Leonardo Gómez Pulido
I-Apple izoba nethuba lokuphendula icala le-Spotify e-EU
Izinsizakalo ze-ICloud nazo zithintekile ngokuwa kweGoogle Cloud